Layma's World: ပြတင်းပေါက်
သူတောင့်တလွန်း၍ ထင်သည်…။ နံရံပေါ်မှာ ပြတင်းပေါက် တစ်ပေါက် ... ရောက်လာသည်…။ ထိုပြတင်းပေါက်သည် ... ဖွင့် မရသော ပြတင်းပေါက် ဖြစ်ပုံရသည်…။ သူမက ထိုပြတင်းပေါက်ကို ဘယ်တော့မှ မဖွင့်ပါ…။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အထီးကျန်နေတဲ့ သူ့အတွက်တော့ ပြတင်းပေါက်တစ်ပေါက်ရှိနေခြင်းက အဓိပါယ်ရှိစေသည်…။ မြင်ကွင်းတွေကို မြင်နိုင်သည်လေ…။ ပြတင်းပေါက်က တဆင့် မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းတွေက သူမျှော်လင့်ထားတဲ့ … လိပ်ပြာလေးတွေ..ပန်းလေးတွေ… စမ်းချောင်းလေးတွေ မဟုတ်ဘဲ ... ထမင်းဆာနေသော ကလေးငယ်များ … ငိုကြွေးနေသော ဇနီးသည်များ … ရုန်းကန် လှုပ်ရှားနေသော ခြေထောက်များ … မညီမညာ ချိုင့်ခွက်တွေပေါ်မှာ ပြေးလွှားနေကြသော ခွေးလေခွေးလွှင့်များ ဖြစ်နေကြသည်…။ သို့သော် သူအရင်ကလောက် အထီးမကျန်တော့ပါ … မြင်ကွင်းတွေက တနေ့တစ်မျိုး မရိုးရအောင် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှသည်…။ အရောင်ပြောင်းနေတဲ့ လူတွေရဲ့ မျက်နှာတွေကို စိမ်ပြေနပြေ ထိုင်ကြည့်ရင်း အချိန်တွေ ကုန်မှန်းမသိ ကုန်သွားသည်…။ ပြတင်းပေါက်က တဆင့် မြင်ကွင်းတွေကိုကြည့်နေရင်း သူ နောက်တဆင့် တပ်ချင်လာပြန်သည်…။ ပြတင်းပေါက်ကို ဖွင့်လို့ရရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ …။ ဖွင့်ကြည့်ချင်လိုက်တာ…။ ဖွင့်လိုက်ရင် အသံတွေကြားရမှာ…။ မြင်ကွင်းတွေက ပိုပြီး အသက်ဝင် လာမှာပဲလို့ အခါခါတွေးမိပြန်သည်…။
Posted by lay-ma at 2:50 AM
ပြတင်းပေါက်တစ်ပေါက် ရှိနေခြင်းဟာ အထီးကျန်မှုရဲ့ လွတ်မြောက်ရာပါပဲ…
ပုံပြင်လေးကို သေချာခံစားသွားပါတယ် ကြွက်ပုံပြင်လေးလိုပဲ အရမ်းကြိုက်တယ် အတွေးအရေးတွေကတော့ လန်းတယ်ဗျို....
အမကြီးရေ ကြွက်ပုံပြင်၊ စက်ရုပ်ပုံပြင်တို့လိုပါပဲ။
တွေးစရာပါသလို ဖတ်လို့လည်း တအားကောင်းပါတယ်။
အမယ်မောင်မျိုးကြီးက ဦးဦးဖျားဖျားကွန့်မန့်ပွတ်သွားတယ် ကောင်းလေစွ ကောင်းလေစွ :) ဒီကောင်လေးအခုတလောလိမ်မာနေပီ :P ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ :)
မလေးမ ရေ .လာဖတ်သွားတယ်နော်..ကောင်းတယ်.ပြတင်းပေါက်လေး က..
စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းစွာ ရေးထားတာလေးကို
စိတ်ဝင်စားစွာ ဖတ်သွားပါတယ် အမလေးမ
but .... something ...
i feel it .
nice point of view .
ပြတင်းပေါက်က ကျဉ်းတယ်. တံခါးပေါက်လုပ်ပေး... အဟင့်... ၀ါး......
စတာပါ လေးမရေ.... အရေးအသားတွေရော အတွေးအခေါ်တွေရော လန်းတယ်. အားပေးနေတယ်ဗျာ...
I have many windows to see outer world.But now all of my windows are closed.How can I see outer world?
Come and open my window just one
ဆိုင်မလား ရွှီးကြည့်တာ ချစ်မရ
ချိတ်ချိုးနဲ့နော် ချစ်မမ အာာာာာာာာဘွားးးးးးးးးး
နောက်ထပ်နောက်ထပ်သော ချစ်မရဲ့ စာတွေကိုစောင့်ဖတ်နေလျက်ပါ
ပြတင်းပေါက်ကို ဖွင့်ဖတ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ ။
............. .............. ............ ................ ..............
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ပြတင်းပေါက်ရှိနေခြင်းသည် ကောင်း၏ ။ :)
မိမိအတွက်သော်လည်းကောင်း ၊ တခြားသောသူများအတွက်သော်လည်းကောင်း
အသစ်အသစ်သော ပြတင်းပေါက်များ ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ပါစေ ။
အရေးအသားပုံစံ သစ်သလိုပဲ ။ အရင်ရေးပုံတွေနဲ့ နည်းနည်းကွဲမယ်ထင်တယ် ။
မိုက်တယ် ။ ကျေးဇူး
ငါ့အမကတော့ လုပ်လိုက်ပြန်ပြီ။ လိုက်လို့ကို မမှီတော့ဘူးနော်။ ကျနောကတော့ ပြတင်းပေါက်က အကင်နံ့ရရင် စိတ်တိုတယ်။ စားချင်ရက်နဲ့ ဝယ်စရာ ပိုက်ပိုက် မရှိလို့ :D
ပြူတင်းပေါက်တဲ့လား အိမ်ပေါ်က အမေမသိအောင် ခုန်ချတာလေ ... ညအပြင်ခိုးထွက်ရင် ဟတ်ဟတ်
ကောင်းတယ် အစ်မလေးမရေ ...။
“စီးကရက်ကိုကြိုက်တတ်ရင်... စီးကရက်မီးခိုးမျက်စိထဲ... ၀င်တာလောက်တော့ ..ခံနိုင်ရည် ..ရှိပါတယ်...ပြတင်းပေါက်ကိုကြိုက်တတ်ရင်....” ဟီး..ဟီး..ဂျေမောင်မောင်သီချင်းဟဲကြည့်တာပါ။
>စိုးမိုးလေး.. စိတ်ဝင်စားပြီး ပြတင်းပေါက်က ခုန်ချချင်စိတ်ပေါက် သွားဦးမယ်..။
>နွေကဗျာ... ကျေးဇူးပါ ညီမရေ..။
>တင့်ထူး.. စိတ်ဝင်တစား ကျေးဇူးတင်တယ်.။
> မင်းထင်... But...what but..? ..what do u feel it ? he..he..thanks.
>ကိုရန် ... တိတ်..တိတ်.. တံခါးဖောက်ပေးမယ်..။
>sparrow... I wanna open all the openings but I can't... But they will open one day..one..day...
>chaos ... ပြတင်းပေါက်သည် လာပါဦး..။
>ဂျယ်ရီ ... မျက်လုံးကို ပိတ်
ပြတင်းပေါက်ကို ပိတ်..တိတ်တိတ်အိပ်..။ ပြတင်းပေါက်ရှိနေခြင်းကြောင့် သော့ကျန်ခဲ့လျှင် ကျော်ဝင်နိုင်သည်..။
…………. …ကျေးဇူး..ရေးနည်းတွေကတော့ မူသေမရှိဘူး...အစုံသုတ်ပဲ..။
>ကျန်စစ် ... အကင်ပူပူနွေးနွေး မွှေး၂ လေးတွေ ရမယ်...။ အရသာရှိလိုက်တာ..။ ရှလွတ်..ရှလွတ်
>မျှားပြာ .. အကျင့်ဟောင်းတွေ ပေါ်ပြီ..။
>မတူးတူး ... သီချင်းဆိုပြတယ်ပေါ့..ကပြဦး..။